Industrial Liquid Kuchengeta Vagadziri & Vatengesi - China Industrial Liquid Kuchengetedza Fekitori
GFS tangi ine yakanakisa ngura kuramba uye inoshandiswa zvakanyanya kuchengetedza acid uye alkali mvura mune emabhizimusi emiti. Iyo enamel inosaswa pamusoro pechinhu cheplate yesimbi, uyezve sintering yakakwira inoitwa kuti iite kuti pamusoro pesimbi yesimbi irambe kusagadzikana. Enamel pamusoro inotsvedzerera, yakapenya uye yakavharwa neakasarudzika sealant, yakakodzera kune akawanda akasiyana emvura ekuchengetera zvinangwa.
Zviri nyore kuisa, kubata uye kusangana zvakasiyana siyana zvemhando yemvura zvinodiwa.
Matangi eGFS anoshandiswa zvakanyanya mukugadzirwa kwemabhizimusi ekuchengetedza mvura. Inogona kutakura akawanda akakosha emvura kana emvura, senge brine, yakanatswa mvura, deionized mvura, munyu mvura, yakanyoroveswa mvura, Ro mvura, deionized mvura uye Ultra yakachena mvura.